विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस : प्रेम जीवन बर्बाद गरिदिने एक मानसिक रोग | Hamro Doctor News
सिजोफ्रेनियाका केही बिरामी आफ्नै परिवार र उपचार गर्ने चिकित्सकसम्मलाई शंकाको नजरले हेर्छन । उनीहरु आफूलाई चिकित्सकले नै मार्न खोजेको ठान्छन् । यस्तै केही बिरामी भने आफ्नो श्रीमतीश्रीमान र प्रेमीप्रेमिकाप्रति शंका गर्छन । उनीहरु सोच्छन की मलाई धोका दिएर मेरो श्रीमानश्रीमती वा प्रेमीप्रेमिका आरु कोहीसँग रासलिला मच्चाइरहेको छ ।
सिजोफ्रेनिया मस्तिष्कसम्बन्धी एक दीर्घ रोग हो । यस्ता बिरामी वास्तविक संसार भन्दा बाहेक आफ्नै काल्पनिक संसारमा रहन्छन । यस्ता बिरामीलाई काल्पनिक संसार नै सत्य लाग्छ र आफुले जे सोच्यो त्यसलाई नै सत्य मानेर बस्छन । यस्तै कुनै गलत विचारलाई गम्भीर मानेर बसेकै कारण आफनै श्रीमानश्रीमती, प्रेमीप्रेमिकाको हत्यासम्म गरेका घटना छन् । यस रोगबारे जनचेतना जगाउन हरेक वर्ष २४ मे मा विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
घरपरिवार र साथीभाइसँगै भए पनि छुट्टै रहन्छ ।
पहिले पहिले जस्तो खुशी र मिलनसार हँुदैन । यो नै सबै भन्दा प्रमुख लक्षण पनि हो ।
सिजोफ्रेनियाको बिरामी आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन सक्दैन । नुहाउन र दात माँझ्न समेत भुल्न थाल्छ ।
खास बिरामी होइन सिजोफ्रेनिया
सिजोफ्रेनिया खास अथवा अनौठो बिरामी होइन । भारतमा मात्रै यस्ता ४० लाख बिरामी छन् । घटना सार्वजनिक गर्दा समाजमा हेप्छन भनेर धेरैले सार्वजनिक भने गर्दैनन् ।
मानसिक रोगसम्बन्धी सबै रोगलाई हाम्रो समाजमा ‘पागल’ भन्ने भएकाले पनि यस्ता धेरै समस्याको उपचार गर्न समेत मानिसहरु आउँदैनन् । तर सबै मानसिक रोग पागलपन होइन ।
सिजोफ्रेनियाका बिरामीको सिधै मस्तिष्कमा असर पर्छ । यसैद्वारा व्यवहारमा परिर्वतन हुन्छ ।
बिरामीको मस्तिष्कमा के चल्छ त ?
सिजोफ्रेनियालाई पनि कयौं भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये धेरैमा हल्युसनेशन डिलुजन (आफ्नै विचारमा खुशी हुने) हुन्छ । तर धेरैजसो समय दुःखी हुने गर्छ ।
हल्युसनेशन डिलुजनमा बिरामी विभिन्न आवाज सुन्छ तर बास्तवमा त्यस्तो केही हुँदैन । साथै उ सोच्छ की मेरै बारेमा कुरा गरिरहेका छन् । यस्तै मानिसहरु मलाई देखेर हाँसिरहेका छन्, सबै मानिस मिलेका छन् र मलाई मार्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।
सिजोफ्रेनियाका बिरामीमा फरक फरक डिलुजन (भ्रमित विचार) आउँछ । केहीमा आफ्नै परिवारप्रति शंका हुन्छ भने केहीमा सिर्फ आफ्नो श्रीमतीश्रीमान र प्रेमीप्रेमिकाप्रति शंका हुन्छ । यही कारण कतिपय त हत्या गर्नेसम्म गर्छन ।
डिलुजन अफ इन्फेडिलिटीका बिरामीमा भने सिर्फ आफ्नो जीवनसाथीप्रति शंका रहन्छ । उसलाई लाग्छ की उसको जीवनसाथी उलाई धोका दिइरहेको छ ।
विशेषगरी डिलुजन अफ इन्फेडिलिटी पुरुषमा हुने मानसिक रोग हो । तर महिलामा हुँदै नहुने भन्ने होइन ।
डिलुजन अफ इन्फेडिलिटी भएका बिरामी अन्य व्यक्तिमा सामान्य रहन्छन् । तर आफ्नो जीवन साथीको हरेक गतिविधि र व्यवहार भने अनौठो लाग्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ । (यो लेख उद्गम मेन्टल हेल्थ केयर एण्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टर दिल्ली, भारतमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. डोना सिंहसँगको कुराकानीमा आधारित छ ।)